स्थानीय तहको ३४ करोड खर्च हुन सकेन | गृहपृष्ठ
Home विकास स्थानीय तहको ३४ करोड खर्च हुन सकेन
on: १७ आश्विन २०७५, बुधबार ०९:२४ विकास
दोलखा । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दोलखाका स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान र स्थानीय तहको आन्तरिक आयसहित रू. ३४ करोड खर्च हुन सकेन । दोलखाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी ९ ओटा स्थानीय तहमध्ये आठओटाले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू. २४ करोड १९ लाख र आन्तरिक आय आम्दानीतर्फ रू. ९ करोड ८७ लाख खर्च हुन नसकेको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दोलखाका प्रमुख कोष नियन्त्रक भीष्मप्रसाद न्यौपानेले दोलखाका स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फको करीब १७ प्रतिशत अनुदान खर्च गर्न नसकेको बताए । उनका जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नै आन्तरिक आम्दानीको समेत करीब ९२ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्क पाइएको जानकारी दिए । खर्च गर्ने स्पष्ट कानूनको अभाव, कर्मचारी अभाव, योजनाको अभाव जस्ता कारण स्थानीय तहले रकम खर्च गर्न नसकेको बताइएको छ ।
जिल्लाका ९ ओटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसँगै सशर्त अनुदानतर्फको रू. ५ करोड ८५ लाख बजेट यसअघि नै फ्रिज पठाएका थिए । वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब ४४ करोड १७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १९ करोड ९७ लाख मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क छ । जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फको बजेट सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फको १४ करोड ४० लाखमध्ये ५ करोड ६८ लाख ८२ हजार बजेट खर्च गर्न सकेन । तर, बिगु गाउँपालिकाले यही शीर्षकको १८ करोड ४० लाख ७५ हजार बजेट शतप्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यसैगरी भीमेश्वर नगरपालिकाले आन्तरिक आय आम्दानीबाट उठेको २ करोड ३६ लखा ४२ हजार खर्च गर्न सकेन । यस्तै, गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको आन्तरिक आयबाट भएको आम्दानी ५२ लाख ७८ हजार शतप्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीयले तहले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा स्थानीयस्तरमा रोजगारी घट्ने सदरमुकामस्थित गौरीशङ्कर क्याम्पसका प्राध्यापक दुर्गाप्रसाद दहालले बताए ।